कोल्टे नफेरेरै उज्यालो हुन्छ: कारागार पुगेका महान्यायधिबक्ता खरेलसंग कैदी बन्दीको गुनासो – Gulminews
Home/समाचार/कोल्टे नफेरेरै उज्यालो हुन्छ: कारागार पुगेका महान्यायधिबक्ता खरेलसंग कैदी बन्दीको गुनासो
कोल्टे नफेरेरै उज्यालो हुन्छ: कारागार पुगेका महान्यायधिबक्ता खरेलसंग कैदी बन्दीको गुनासो
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ बैशाख १६, सोमबार २१:१६ मा प्रकाशित
गुल्मी, १६ बैशाख । “कोल्टे नफेरेरै रात बित्छ”, जिल्ला कागागार गुल्मीका कैदी लेखनाथ गिरीले भने, “२५ जना बस्ने घरमा ७१ जना आफै कल्पना गर्नुस् ।” जिल्ला कारागारको अनुगमन गर्न गएका महान्याधिवक्ता अग्नि खरेललाई धेरै कैदीबन्दीले आफ्ना गुनासा पोखे । उनीहरुले क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी हुँदा कारागार भेडिगोठ जस्तै भएको गुनासो गरे । कैदी गिरीले अहिलेसम्म आफुहरुको गुनासो सुन्ने काम मात्रै भएको बताए । ‘जुनसुकै कार्यालय र व्यक्ति आएपनि सुनासो मात्रै सोधिएको छ’, उनले भने, ‘कारागारको बर्षौका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।’
अदालतको प्रक्रियाले आजित
कैदी बाबुलाल विकले आफुहरु अदालतको झन्झटिलो प्रक्रियाबाट आजित भएको गुनासो गरे । उनले समयमै पेशी नहुने, फैसला भएको मिसिल लामो समयसम्म प्राप्त नहुने जस्ता समस्याले आफुहरुलाई निकै गाह्रो भएको बताए । ‘बर्षौ फैसलाला फाइल पाएका छैनौ, अदालतको प्रक्रियाले आजित भएका छौ,’उनले भने,‘जसका कारण माथिल्लो कानुनी उपचारबाट बञ्चित भइयो ।’ बन्दी बिष्णु पन्तले खानेपानीको संकटका कारण आफुहरुलाई समस्या भइरहेको बताए । उनले कारागारले टयाङकर मार्फत पानी ल्याउने गरेपनि प्राप्त नभएको बताए । जसका कारण खाना पकाउन, पिउन तथा लुगा धुन निकै कठिन भएको बताए ।
खरेल र कैदीबन्दीबिच अन्तरसंवाद
महान्याधिकक्ता अग्नि खरेल सोमबार दिउँसो गुल्मी कारागार पुगे । कारागारको सवै अवस्थाको बारेमा अवलोकलन गरे । त्यहाँको उत्पादन देखेर छक्क परे । अनि कारागार प्रमुख अर्जुन थापालाई सोधे, कारागारको क्षमता कति हो ? जवाफ आयो । २५ जना । अनि खरेलले फेरि सोधे कति जना छन् ? ७१ जना । खरेलले चारैतिर नियाल्दै भने, यो कारागार अल्ली बिसेस अन्यत्र झन बिजोग छ । त्यसपछि महान्याधिवक्ता खरेलले कैदी बन्दीसंग अन्तरसंवाद सुरु गरे । क्रमैसंग राज्यले कारागारबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका बारेमा सोधे । खरेलले कारागारको समस्याको बारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएकाले सम्बन्धित निकायबाट समाधानको बिकल्प खोजिने बताए ।
वकिल राखेर लड्नुस्: खरेल
महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले कैदीबन्दीहरुसंग अन्तरसंवाद गर्दै आफ्नो मुद्धाको बिषयमा वकिल मार्फत कानुनी उपचार खोज्न आग्रह गरे । उनले आफुहरुलाई अदालतमा के बोल्ने र कानुनी बिषय के भन्ने बारेमा जानकारी नहुँने भएकाले वैतनिक वा प्राइभेट वकिल मार्फत अघिल्लो प्रक्रिया खोज्न सुझाव दिए । ‘कैयौ व्यक्तिलाई आफ्नो मुद्धा र कानुनी प्रक्रियाको बारेमा अवगत छैन’, उनले भने, ‘वकिलले कानुनी उपचार गराउँछन् ।’ उनले कानुनी अज्ञानताले पनि थुप्रै मान्छे फस्ने भएकाले सवैलाई सचेत बनाए ।
प्रहरी हिरासत निरिक्षण
महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षको समेत अनुगमन तथा निरिक्षण गरेका छन् । उनले हिरासतमा रहेकाहरुको मुद्धा र कानुनी उपचार, सेवा सुविधा, यातना तथा अन्य प्रक्रियाको बारेमा चासो राखेका थिए । साथै उनले हिरासतबाटै मुद्धाको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले आफुले विश्वास गरेकै कानुन व्यावसायी मार्फत मुद्धा अगाडी बढाउन सुझाव दिए । उनले सुरुमै मुद्धा बिग्रिए न्याय नपाइने भएकाले बिचार पु¥याउन आग्रह गरे । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट एसपी दिपक कुमार बस्नेतले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।